Iincwadi zikaLorenzo Silva zi-icon kuhlobo lwenoveli yomcuphi. | Uncwadi lwangoku
U-Lorenzo Silva: iincwadi ezikhoyo
UJuan Ortiz | | I-Biography, Ababhali, Inoveli emnyama
Umbhali uLorenzo Silva.
Ukubeka "iincwadi zikaLorenzo Silva" kwiinjini zokukhangela kukufikelela kweyona ncwadana iphambili yabacuphi, apho isenzo kunye nemfihlakalo sisitya sosuku. Umbhali wazalelwa eMadrid, eSpain, ngoJuni 7, 1966. USilva waqala ukuba nomdla kuncwadi esencinci kakhulu, kwaye ifuthe lakhe kuncwadi belinjalo kangangokuba kule minyaka idlulileyo imisebenzi emininzi ayenzileyo iguqulelwe kwi IsiTaliyane, isiRashiya, isiJamani, isiFrentshi, isiArabhu nesiCatalan.
Lorenzo ufumene ukwamkelwa kwihlabathi liphela ngeencwadana zakhe zomcuphi, Ityala elivelayo yile Ischemist engenamonde (1999). Lo msebenzi wawuthathela ingqalelo ulutsha oluninzi kwaye wawufanele neBhaso likaNadal ngo-2000. Abadlali abaphambili bezi noveli yayingabalindi ababebizwa ngokuba yiVirginia Chamorro kunye noRubén Bevilacqua.
1 Ulutsha kunye nezifundo
2 Ukuqala kobomi bakhe boncwadi kunye nokuqwalaselwa kokuqala
3 Bevilacqua kunye neChamorro
4 Phakathi kothando, umsebenzi kunye nembuyekezo
5 Uncwadi lusebenza nezihlobo zakho
6 U-Lorenzo Silva: iincwadi ezibonisiweyo (izicatshulwa)
6.1 Ischemist engenamonde
6.2 Ilizwe elikude lamachibi
6.3 Ubuthathaka beBolshevik
7 Amanye amabhaso nokwahlulahlula
USilva wazalelwa ebumelwaneni kwikomkhulu laseSpain elibizwa ngokuba yiCarabanchel, ngakumbi kwigumbi lokubeleka kwisibhedlele somkhosi esidala saseGómez Ulla. Abazali bakhe yayinguJuan Silva noPaquita Amador. Kwiminyaka emihlanu wafudukela kwisithili saseLatina esibizwa ngokuba yiCuatros Vientos., eMadrid, apho waqala khona ukubhala xa wayeneminyaka elishumi elinesithathu kuphela ubudala.
Ngexesha lokufikisa kwakhe wabhala ngokubhuduzela, yaye ukususela ngoko, walugqala uncwadi njengorhwebo lwakhe. Ngo-1985 waya kuhlala eGetafe, eyenye yezona ndawo zithandwa ngumbhali nalapho azinikezela khona kwi-trilogy. Emva kwexesha, waphumelela kwezomthetho kwiYunivesithi yaseComplutense yaseMadrid.
Umbhali uthathe isigqibo sokufunda umthetho kuba wayecinga ukuba ngumsebenzi oza kumzisela amathuba amahle. Ngeli xesha uLorenzo omncinci wafumana ulwazi olwamnceda ukuba abhale imisebenzi yakhe. Ngo-1990 wayesebenza njengomcebisi werhafu kwaye ngo-1991 njengomphicothi zincwadi weakhawunti.
Ukuqala kobomi bakhe boncwadi kunye nokuqwalaselwa kokuqala
U-Lorenzo Silva uqhubeke nokwenza umthetho kwinkampani yamandla ngo-1992. Ngeli xesha wapapasha iinoveli ezinje nge NgoNovemba ngaphandle kwee-violets (1995), Into yangaphakathi (1996) nakwi unyaka opapashe Ubuthathaka beBolshevik (1997) wayegqibezele amabhaso kaNadal.
Ibali lokuqala awalipapashayo malunga noonogada uBevilacqua noChamorro Ilizwe elikude lamachibi (1998), emva konyaka kwazalwa intombi yakhe uLaura kwaye ngo-2000 waphumelela ibhaso likaNadal Ischemist engenamonde. Eli xesha lalilungile kumbhali, ke wacela ikhefu lokungabikho ngo-2002, wayeka ukusebenza njengegqwetha kwaye wazinikela ngokukodwa ekubhaleni.
Bevilacqua kunye neChamorro
Aba bantu bangabalinganiswa abaphambili kulwaphulo-mthetho lukaLorenzo SilvaBobabini bahamba kunye eSpain bephanda zonke iintlobo zokubulawa kwabantu. Ekuqaleni uBevilacqua wayengakuthandi ukusebenza neChamorro; kodwa kamva lafumana imbeko kweli gosa.
URuben Bevilacqua ("Vila") yindoda enyanisekileyo engenasiphako, waseUruguay owaya eSpain nonina, emva kokuba uyise ebashiyile. Wayenonyana awayegcina ubudlelwane obuhle naye, kodwa akamtyeleli rhoqo emsebenzini wakhe.
UVirginia Chamorro Uyisajini esencinci efihla ukuthanda kwakhe inzululwazi ngeenkwenkwezi. Uneminyaka engama-24 ubudala, kwaye nangona utata wakhe wayeyindoda yasemkhosini, wayenamava ambalwa endle xa wayeqala ukusebenza noVila. Ungumfazi oneentloni kwaye kuwo onke amabali waqala ukuba ngophumayo kancinci.
Ubudlelwane bukaVila noChamorro bakhula ngendlela elungileyo ebudeni beminyaka elishumi elinesihlanu eyadlulayo kumabali. Inyani yokuba basebenze kunye ixesha elide yenza ukuba unxibelelwano lwabalinganiswa lufikelele kwinqanaba lokuqondwa ngaphandle kwamagama. Sele ikho namhlanje I-Bevilacqua kunye ne-Chamorro bezikwincwadi ye-Hispanic iminyaka engama-20.
Phakathi kothando, umsebenzi kunye nembuyekezo
Ngo-2001 uLorenzo Silva wadibana noNoemí Trujillo Kwivenkile yeencwadi iLaie e-Barcelona. Ekuqaleni kobudlelwane babo, uLornzo wenza ingxelo yefilimu ye Ubuthathaka beBolshevik Kunye nombhali kunye nomlawuli uManuel Martín.
Olu hlengahlengiso lwafumana ukutyunjwa komdlalo bhanyabhanya ogqwesileyo kwi-Goya Award ngo-2004 kwaye uMaría Velarde, owayengumdlali ophambili wefilimu, waphumelela ibhaso lomdlali weqonga omtsha. Kwiminyaka emine emva kokufumana olu lonyulo, Ngo-2008, ngokusesikweni, uLornzo waya kuhlala noNahomi.
Lorenzo Silva kunye noNoemi Trujillo.
Uncwadi lusebenza nezihlobo zakho
U-Lorenzo Silva wabhala kunye nentombi yakhe uLaura incwadi enesihloko Umdlalo wevidiyo ujonge ezantsi. Isakhiwo sebali senziwe ngumfazi omncinci, kwaye ngoncedo lukayise balungisa kwaye bapapasha ngo-2009. Kwiminyaka emine emva kwesi siganeko, uNuria, udadewabo kaLaura, wazalwa.
U-Lorenzo ubhale kunye nenkosikazi yakhe iinoveli ezine zolwaphulo-mthetho, ngo-2013 bapapasha Suad kwaye ndafumana iMbasa yeLa Brújula. Ngo-2016 bapapasha Akukho nto imdaka: ityala lokuqala lomcuphi uSonia Ruiz; Ngo-2017 Ibhotwe likaPetko kwaye kwiminyaka emibini kamva Ukuba lo ngumfazi. Umsebenzi wakho ulungile kwaye mvanje Ime phakathi kweencwadi ezinkulu zoncwadi lwaseSpain.
U-Lorenzo Silva: iincwadi ezibonisiweyo (izicatshulwa)
Nazi ezinye zezicatshulwa ezivela kwezona ncwadi zibalaseleyo zikaLornzo Silva:
Isahluko sokuqala: Uncumo olunobubele.
Indlela esasimile ngayo yayingonwabisi kwaphela. Umzimba ujonge ezantsi, iingalo zandiswa zaya kubude obugcweleyo kwaye izihlahla zibotshelelwe kwimilenze yebhedi.
“Ubuso bakhe babuguqukele ngasekhohlo kwaye imilenze yakhe yayigobile phantsi kwesisu. Iimpundu beziphakanyiswe kancinci kwizithende kwaye phakathi kwazo beme, ngenxa yokugoba kwabo okungenamandla, ipali yerabha ebomvu enombala opinkwe ngepompo epinki ”.
Ilizwe elikude lamachibi
Yile nto bendifuna ukuyazi, ukuba uza kufika phi emhlabeni xa utyiwe yile nto ayixelelwe ngumphathi. Ndinobuganga bokukunika iingcebiso, sithandwa sam, hayi ngenxa yento endiyinxibayo kwigxalaba kwaye awunxibanga, kodwa ngenxa yokuba ndimdala kuwe.
“Zama ukufumanisa ukuba bafuna ntoni abaphathi bakho kwaye uzibulale ngenxa yokuba uyifumene, kodwa ufumane njengoko ubona kufanelekile, hayi ngendlela ebonakala kubo. Umphathi ufuna umbulali kwaye siza kumnika yena. Inkqubo ixhomekeke kuthi, ngaphakathi kwemida ebekwe kuthi ”.
“Bendingasoloko ndingumfana onomphefumlo phakathi kweebhola. Iminyaka emininzi ndingakhange ndifunge nokuthuka, kwaye ndide ndisebenzise isigama kwaye ndikhetha isigama kwezinye ezininzi.
"Ngoku ndigqibe kwelokuba ubomi abufanelanga ngaphezu kwamakhulu amahlanu amagama kwaye awona afanelekileyo ngamagama esiqalekiso, kodwa ayikuko ukuba ayikaze idlule apha, kodwa kukuba ndifikile apha."
Lorenzo Silva: iincwadi ezibalaseleyo.
Amanye amabhaso nokwahlulahlula
-Imbasa yokuFikelwa kwaBantwana-Apel.les Mestres 2002-2003 (ULaura nentliziyo yezinto).
I-Primavera de Novela Award ngo-2004 (Ikhadi elimhlophe).
-Umbeko woMkhosi woLuntu ngo-2010.
-I-Algaba Essay Award ngo-2010USerene usemngciphekweni: Imbali yoTyelelo loLondolozo loLuntu).
-Lungu leMbeko yeThala leeNcwadi likaRhulumente leCarabanchel ngo-2012.
Imbasa yePlanethi ngo-2012 (Uphawu lweMeridian).
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iintlobo » Inoveli emnyama » U-Lorenzo Silva: iincwadi ezikhoyo
IHiroshima. 6 Agasti. Iincwadi ezi-5 zokukhumbula.
Olunye u-Agasti wokubhala kuzo zonke izinto ozithandayo